तपाईं आफ्नो शरीर माथि पंप लक्ष्य सेट गर्नुभयो भने, तपाईंको किरा को वजन पहिलो र मौलिक कार्य हो। तपाईं वजन वृद्धि छैन भने तपाईं आफ्नो मांसपेशिहरु मात्रा बढ्न छैन भनेर सहमत हुनुहुन्छ। यस लेखमा हामी यस्तो दुबला मांसपेशिहरु को भर्ती र यो गर्न आवश्यक छ कि मुद्दाहरू हेर्न हुनेछ।
तपाईं एक भारी गठन छ भने, त्यसपछि तपाईं को लागि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर केही नियमहरू छन्।
पहिलो, राम्रो खाना। आहार कि बोसो र कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रकम समावेश खाद्य पदार्थ समावेश गर्नुपर्छ। तपाईं बल र संयोजन गर्न आवश्यक एरोबिक व्यायाम। खैर, यो नाटकीय परिवर्तन भएन आफ्नो प्रशिक्षण खुराक गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उचित पोषण लागि रूपमा सजिलै पारित गर्न आवश्यक छ।
आफ्नो सेना गणना, एकैचोटि सबै अभ्यास गर्न हतार छैन। अन्यथा तपाईं मात्र स्थिति बढन र चोट मा हुनेछ। वजन खेल पूरक आहार को खपत पनि समावेश छ। यहाँ तिनीहरूलाई एउटा सानो सूची छ:
Bcaa (एमिनो एसिड, प्रशिक्षण समयमा अपरिहार्य छन् जो)।
सं संग जटिल (व्यायाम अघि प्रयोग)।
जटिल भिटामिन र खनिज।
Zhiroszhigatel वा एल-carnitine।
हामीलाई आवश्यक छ किन बुझ्न विशेष मा प्रत्येक उत्पादन विचार, गरौं।
यो मुख्य छ प्रोटिनको स्रोत, बरु - र यो सबै भन्दा शुद्ध प्रोटिन हो। यो थपिएको को, तपाईं वजन लागि आवश्यक एमिनो एसिड प्राप्त। यसको फाइदा यसलाई राम्रो तरिकाले assimilated छ छ, र तपाईं मात्र एक पेय भन्दा पिउन साधारण खाना केही सर्विंग्स खान आवश्यक छ। यो bodybuilders देखि, को खेलाडीहरूलाई अधिकांश लिन पूरक र हकी खेलाडी संग समाप्त हुन्छ।
निस्सन्देह, तपाईं खान सक्नुहुन्छ प्रोटिन खाद्य पदार्थ, यस्तो बाछाको मासु, चिकन स्तन, मासु, र अरूलाई रूपमा। तर तिनीहरूले प्रोटिनको धेरै कम digestibility छन्।
Fauna र वनस्पति - यो प्रोटिन धेरै प्रकार को छ। पशु प्रोटिन जस्तै प्रकार छ:
लागि बोट को प्रोटीन प्रकार सोया समावेश गर्नुहोस्। उहाँले लागि categorically पशु खाना प्रयोग इन्कार गर्ने खेलाडीहरूलाई vegetarians सिद्ध छ।
को प्रोटिन सीधा वजन सेट असर भनेर नबिर्सनुहोस्। लगभग 25 मिनेटमा प्रशिक्षण अघि 50 मिनेट बिहान यो र पछि: यो एकदम सरल लिनुहोस्।
यो उत्पादन ठूलो भर्ती लागि अपरिहार्य हुन मानिन्छ। उहाँले सबै भन्दा राम्रो विरोधी-catabolic, अर्थात् छ यो मांसपेशी फाइबर बलियो र विघटन रोक्छ। valine, leucine, isoleucine - यो3एमिनो एसिड हुन्छन्। यसबाहेक, यी पदार्थ एक्लै शरीर मा उत्पादन छैन, तर यो उहाँलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। Bcaa सुकाउने लागि सिद्ध छ। प्राप्त गर्ने प्रोटिनको भन्दा अलि बढी जटिल को एक विधि। यो एसिड को 1 G आफ्नो वजन 10 किलो मा एक दिन एक पटक तुरुन्तै व्यायाम पछि र यो पहिले बारेमा 35 मिनेट को लागि उपभोग गर्न आवश्यक छ।
ग्याँस को यो फारम सँगै संचार कक्षहरू लागि आवश्यक छ जो शरीर मा। शरीर नै उत्पादन उत्पादन को सक्षम छ, तर यो प्रशिक्षण लागि पर्याप्त छैन। खाली पेट मा प्रशिक्षण अघि लिन आवश्यक छैन।
Zhiroszhigatel र एल-संगरोध
शीर्षक देखि यो पदार्थ अतिरिक्त बोसो बाल्न मद्दत गर्छ कि स्पष्ट छ। बोसो धेरै छैन भने, तपाईँले एल-संगरोध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन को औषधिको खुराक व्यक्तिगत प्रत्येक मामलामा मानिन्छ।
उत्पादनहरु को शरीर मा भिटामिन को स्तर वृद्धि र स्वास्थ्य सुधार उद्देश्य छन्। यो बोसो बर्नर संग भिटामिन प्रयोग गर्न विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
नियमित व्यायाम एक सेट वजन प्रदान गर्नेछ। भोजन additives को मात्र होइन प्रयोग, तर पनि सामान्य सन्तुलित आहार समावेश गर्नुपर्छ।
एब्स र obliques मा अभ्यास
घर मा छाती मांसपेशीमा कसरी निर्माण गर्न
मांसपेशी निर्माण को लागि स्टेरयड
बोसो वा मांसपेशी - मानव शरीर मा भारी छ?
Osteochondrosis विरुद्ध घाँटी लागि अभ्यास
यस नगरपालिका को नाम हो? प्रक्रिया र प्रकारका
स्ट्रोक को उपचार मा पानी प्रक्रियाहरु
सेन्ट निकोलस दिन
इगोर Miroshnichenko: जीवनी र भ्रष्टाचार
किन धुवाँ को सपना? सपना पुस्तक भन्नेछु!